China SINOTRUK HOWO LIGHT CARGO TRUCK ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya NA -ENWU MMIRI
Ụgbọ ala na -ebu ibu bụ ụgbọ ala ọgbọ ọhụrụ nwere nnukwu nrụpụta ketara site na nzukọ teknụzụ ọhụrụ na -achịkwa okporo ụzọ, yana ike injin, nkwụsi ike, arụmọrụ mmanụ ụgbọ ala na nkasi obi ịnya ụgbọ ala n'ogo ụwa.
Ụgbọ ala na -ebu ibu bụ ọgbọ ọhụrụ nke nwere nrụpụta dị elu eketara site na nzukọ teknụzụ ọhụrụ nke na -achịkwa okporo ụzọ, yana ike injin, nkwụsi ike, arụmọrụ mmanụ ụgbọ ala na nkasi obi ịnya ụgbọ ala n'ogo ụwa. Ọ dị mma, nwee ntụkwasị obi na amamihe dị ka ndị ọgbọ ya niile n'ahịa ụwa, yana nhọrọ agbakwunyere agbakwunyere maka ịhazi ya, na-eme ya nhọrọ zuru oke maka ọrụ ụgbọ njem na-ahazi nke ukwuu na nke a haziri nke ọma na ngwa agha dị elu.
Dịka otu ndị na -ebubata gwongworo ibu, anyị nwere ọwa iji nweta ọnụahịa pụrụ iche maka gwongworo ibu.
01. Pụrụ iche na ụlọ ọrụ gwongworo ihe karịrị afọ 10, anyị doro anya mara ihe ndị ahịa chọrọ n'ezie. Anyị nwere ike ịkwado ụgbọ ala ibu maka onye ahịa.
04. Anyị nwere ọtụtụ ngwaahịa, nwere ike izute ọrụ ndị ahịa chọrọ.
Ụgbọ ala: gwongworo traktọ, nnukwu mbadamba ihe, nnukwu ihe igwe ihe, CNG gwongworo, gwongworo ibu, gwongworo tank, gwongworo ihe mkpofu, ụgbọ ala niile, ụgbọ ala pụrụ iche, ụgbọ ala. onye na -ebu ya, ndekọ osisi, Tipper, wdg.
Ụgbọ ala SINOTRUK HOWO 102HP
(AKWỤKWỌ aka ekpe)
Ike Ibu Ibu n'ezie 4000kg (na ezi nkwenye okporo ụzọ)
Injin YN4102, 102HP
N'ihu Axle 2400 n'arọ
N'azụ Axle 4200 n'arọ
Igbe igbe WLY6T46, ọsọ 6 na -aga n'ihu na 1 ntụgharị ọsọ
Taịa 7.00R16, ya na otu wiil mapụtara
Ụlọ 1880, enweghị igbe, yana eriri nchekwa, yana A/C
Ọkpụkpụ ụkwụ 3360mm ogologo
Agba acha ọcha, ọbara ọbara, wdg
Akụkụ igbe ibu 4200x2050x400mm
N'ozuzu akụkụ 5995x2150x2450mm
Nke gara aga: Ụgbọ ala traktọ ụgbọ ala SINOTRUK HOVA
Osote: Ụgbọ ala mmanụ ụgbọala FOTON Auman 4 × 2 12cbm
Ụgbọ ala igbe
Cargo Van gwongworo
Nnukwu gwongworo na -ebu ibu
Ụgbọ ala M35
Obere ụgbọ ala ibu
Gwongworo na ibu
Ugbo ala na ibu Germiston